BALSAM WALSER OO KA SOO KORAYA ABUURKA, BEERITAANKA IYO DARYEELLAHA GURYAHA XAYAWAANKA GURIGA (SAWIR) - SOOSAARKA DALAGGA
Balsam Waller badanaa waxaa laga heli karaa daaqadaha iyo beerta hore. Waxa kale oo mararka qaar loo yaqaan 'touchy', sababtoo ah isagoo taabanaya wax yar ama nalka iftiinka ah, wuxuu bilaabaa inuu toogto sanduuqyada abuurka. Maqaalkani wuxuu ka hadli doonaa sida si habboon u koraan oo u dacaaytaan ubax, iyo sidoo kale ku saabsan sifooyinka daryeesha.
Balsam waa warshad quudin ah, oo dhererkeedu ka yaryahay 15 illaa 60 cm, waxaa si xaq ah loo tixgeliyaa mid ka mid ah wakiilada dhirta ugu dheer ee ubaxyada ah oo qurxin kara guriga iyo taranka ama dhismaha beerta.
Balsam Waller waxaa iska leh qoysaska dilka ah, laakiin waxay u muuqan kartaa sanadkiiba. Haddii ubaxa waa la koray sida xayawaanka, waa a perennial. Si kastaba ha ahaatee, beerta, waxay u dhaqmaan sida geedka sanadlaha ah, tan iyo barafka qaboobaha aan awoodin in ay adkeeyaan.
Ma taqaanaa? Dadka waxaa ka mid ah balsam loo yaqaan 'Vanka qoyan, maaddaama dhibco yaryar oo qoyaan ah lagu abuuray talooyinka caleemaha, ama duufaan sababtoo ah midabyo dhalaalaya.
Nooca baalasha balsam waxay noqon kartaa mid qumman, qoto dheer, oo u eg dhul ama faafin, waxay ku xiran tahay noocyada kala duwan. Warshadu waxay leedahay dhumuc qaro weyn leh.
Midabkiisu wuxuu ku kala duwanaan karaa cagaar cagaaran illaa guduud. Dhammaadka asliga ah waa ubaxyo fudud ama laba jibbaaran, oo kori kara inflorescences dhowr qaybood, ama kali ah.
Midabada midabka leh waxay ku xiran tahay kala duwanaanta waxay ka kooban tahay ilaa 17 midabo kala duwan. Waxaa jira ubaxyo leh midab casaan, caddaan ah, casaan, noocyo leh midab laba-midab ah, iskudhufay ama la arkay meel dhexe oo ubax ah, iyo sidoo kale tufaaxa.
Balsam Walser waa geedka qunyar socod ah (ilaa 60 cm xaaladaha qolka). Caleenta ubaxan wuxuu ku koraa oo kale wuxuuna leeyahay xidid dhexe oo casaan ah. Nooca caleemaha wuxuu noqon karaa mid lanceolate, oo dhan ama qaybta ilkaha. Dhinaca caleenta waxaa lagu uruuriyaa dhibco cabitaan macaan oo soo jiidata dhirta. Ubaxa wuxuu ku yimaadaa qaabab kala duwan (kakan iyo sahlan), qaddarkooduna waa kala duwan yahay 2 ilaa 6 cm dhexroor. Caleemaha ayaa badanaa ah casaan, laakiin Beeluhu waxay yeelan karaan midabyo kala duwan.
Warshadu waxay leedahay nidaam xidid adag, iyo noocyada shakhsiyeed ee xididdada waxaa lagu uruuriyaa hal meel. Inkasta oo Walley's saboolnimadu ay tahay wakiil dhirta dheer, noocyo taxane ah oo aan ka badneyn 30 cm ee dhererka.
Geedaha sida Babian, Adonis, Levkokorina, Crinum, Rhodohipoxis, Pentas, Dodecateon, Sparaxis, Scevola, Sidealcea, Gloriosa, Agapanthus, Penstemon, Lavater, Armeria, Clove Peary iyo Chionodox ayaa sidoo kale ka buuxi beertaada midabyo dhalaalaya.
Ka dib markii uu dhirta dhirbaaxda ka dillaacdo, miro ayaa la sameeyaa, taas oo ah sanduuq abuur oo leh tiro badan. Waxay leedahay 5 warqadood oo furan inta lagu jiro Bisitaanka.
Zanzibar waxaa loo tixgelinayaa in ay tahay goobta lagu aasay ee Waller's balsam. Warshad waxaa sidoo kale loo yaqaan 'Impatiens sultanii'. Waxaa la siiyay magac caynkan oo kale ah oo sharaf leh taliyaha Zanzibar, oo xukuma bartamihii qarnigii XIX (waxay ahayd xilligaas oo noocyada noocaas ah la helay). Balsam Balsam ee ugu caansan Waller ayaa laga helay dalalka leh cimilo diirran. Waxaa sidoo kale caan ku ah meelaha leh cimilada dabiiciga ah.
Ma taqaanaa? Qurxinta meel bannaan oo cagaarshow ah ayaa aad u caan ah maxkamadaynta hoggaamiyeyaasha bariga ee muddo dheer. Wadankan Europe, isla dhaqankaasi wuxuu ku faafay Renaissance.
Walter balsam waxaa loo isticmaalaa in lagu qurxiyo xuduudaha, abuuro ubax qurxoon oo qurux badan ama dhagaxyo lagu qurxiyo, sariiraha ubaxa oo qoyan. Waxay u egtahay ubax wanaagsan oo ku yaal daarro iyo weelasha beerta. Sidoo kale waxay heleen shaashooyin qurxoon oo leh daal. Si ay u abuuraan, afar xabbadood ayaa loo adeegsadaa, kuwaas oo lagu riixay 1/3 dhulka. Xaaladda soo baxday waxaa lagu daboolaa mesh balaastik ah oo weyn oo leh lutrasil madow.
Qaabdhismeedka soo baxay ayaa la daboolay dhulka, halka laba hose loo dhajiyay si loo hubiyo waraabka. Marka dhulka la dhigo ee lutrasil ka sameeyaan dabaqyo iyo duurka dhirta la beeray. Marka laga beerto waxaa loo isticmaali karaa dhirta dhalinyarada ah, iyo horeba ubax.
Haddii aad rabto in aad qurxiso beertaada, waxaan kugula talineynaa inaad ka akhridid ​​sida loo sameeyo santuuqa alpine, sariirta dhagaxyada iyo taayirada gawaarida, dhoobada, isku dhafka, dabaylaha dhagaxyada, beerta caleemaha, qulqulka qalalan, ilo iyo ilmo.
Si tartiib ah, dhirtu waxay bilaabaan inay koraan oo ay sameeyaan shaashad guud oo qurxoon. Noocyada hooseeya ee soo kordhaya waxay ku habboon yihiin in la abuuro sariiraha noocyada ubaxa ah iyo beeraha dhagaxyada. Impatiens sidoo kale waxaa loo isticmaalaa in lagu qurxiyo terraces ama meelaha kale ee bannaan. Ku beeray dhoobada ubaxa ama baayacmushtarka, iyo sidoo kale dhirta lagu qurxiyo.
Qaar badan oo beeralaydu waxay jecel yihiin ubax dheer oo badan oo ah balsam, taas oo ka badan lacagtii dadaalka sannadlaha ah ee lagu beeri lahaa dhirtaas. Ku raaxaysashada taabashada intii suurogal ah waxay caawin doontaa daryeelka saxda ah. Marka arrintan la eego, aynu ka fekerno xaaladaha ugu habboon ee koritaanka fiican ee warshadan.
Impatiens waa ubaxa ugu fiican ee beeralayda bilowga ah, sababtoo ah uma baahna daryeel gaar ah. Waxaa lagu beeray karti kala duwan. Waana midkani sida dheriga ubaxa, iyo saxaarada balakoonka ah, dheriyada ama dambiilaha.
Fiiri liistada ubaxyada dhaadheer ee dheryaha.
Saldhigyada cagaarka ah ee sabirnimada waxaa laga helaa berriga ama berriga, iyo sidoo kale daaqadaha ama balakoonka. Ubax Tani waxaa loo isticmaali karaa in lagu qurxiyo beerta, oo ku beeri dhul furan. Muddada ubaxyada beerta ee beerta ayaa sii socota xagaaga oo dhan, iyo guriga - inta ugu badan sanadka. Waxaa lagama maarmaan ah in si taxadar leh loo doorto meesha ugu wanaagsan ee loogu talagalay nin qurux badan oo ubax ah, sababtoo ah qorraxda tooska ah waxay keeni doontaa ciidda si dhakhso ah u qalajin. Si kastaba ha ahaatee, taabashadaas waxay u baahan tahay qorraxda badan. In beerta hore waxaad ku dhali kartaa balsam hoos taajkii geedka.
Waxaa haboon in la beero Waller ee balsam ee ciidda furan kaliya ka dib markii xasiloon iyo cimil diiran la sameeyey, marka aysan jirin wax khatar ah oo aan dhicin. In latitudes dhexdhexaad ah, waxaa fiican in ay ku beeri kaliya ee bartamihii June, marka inta badan dhirta horay u sameeyay cagaaran iyo bilaabeen si firfircoon u Bloom.
Marka aad dooranaysid goobta, waxaa kale oo lagama maarmaan ah in la tixgeliyo joogitaanka diyaarinta ama dabaylaha xooggan. Saameynta noocan oo kale ah waxay si xun u saamayn kartaa lafdhabarta curyaaminta. In habka beerto balastar waa in ay tixgeliyaan masaafada u dhexeysa duurka. Muuqaalkaan waxaa lagu qiyaasaa 25 cm. Meelahan oo kale, baadiyaha ayaa isku dhafan oo abuuri kara difaac ka badan oo lagu kalsoonaan karo oo ka yimaada dabayl iyo roobab, sidoo kale waxay kuu oggolaaneysaa inaad hayso qadarka ugu badan ee qoyaanka.
Ma taqaanaa? Markii hore, xitaa xafladaha shakhsi ahaaneed waxay u heellan yihiin ubaxyada ugu caansan. Tusaale ahaan, Giriiggii hore waxaa jiray fasaxyo foosto iyo jilicsan, iyo Jarmalka - violets.
Ha iloobin sidoo kale ku saabsan caleemaha qallalan iyo ubaxyo qallalan. Si loo dhiso xirmo dhagax ah, waxay u baahan tahay caleemaha cusub. Tani waxay abuuri doontaa qaab isku dhafan oo jilicsan ee baadiyaha.
Haddii balsam xagaaga ay ku koraan dhul furan, ka dibna waxaa loo wareejin karaa dheriga jiilaalka. Waxay u fiicantahay inaad tan sameyso xilliga dayrta, laakiin ka dib marka xubin ka mid ah beerka, dibudejinta uma dulqaadan karto cimilada qallalan ee kulul ee guriga.
Balsam si fiican u koraa ciidda, saldhigga kaas oo ah peat. Waxaad isticmaali kartaa substrate dhamaystiran oo lagu daro ciid ah ee saamiga 5 ilaa 1 ama isku dar dhir beerta, ciid qalafsan iyo peat ee qaybo siman. Qaar ka mid ah beeralayda qaarkood waxay isticmaalaan isku dar ah 2 illaa 1 si ay u beeri waayaan.
Waxay noqon doontaa mid waxtar kuu leh inaad ka akhrido nooca cayayaanka ee jira, sida loo hagaajinayo bacriminta ciidda, sida si madaxbannaan loo go'aamiyo kiimikada ciidda ee goobta, iyo sidoo kale sida loo yareeyo ciidda.
Carrabku waa inuu ahaado mid u dhow dhexdhexaad (5.5-6.3 pH). Laguma talin in lagu daro waxyaabo cusub oo bakeeriga ah (compost), sida balsam uu si xun u falceliyo, gaar ahaan, waxay ku saabsan tahay beeritaanka dhalinyarada. Carrabku waa inuu ahaadaa iftiin, dabacsan, oo biyo fiican leh.
Inta lagu jiro muddada gaysashada, waxaa lagama maarmaan ah in la bilaabo bacarinta 1 mar 10 maalmood. Xulashada waa ka wanaagsan in la siiyo bacriminta fosfate-potassium. Iyadoo bilawga xilliga dayrta, dhirta uma baahna nafaqo dheeraad ah, sidaa darteed, quudinta ayaa la joojiyaa. Sidoo kale, ha abuurin dhirta dhowaan la soo saaray.
Impatiens waa geedka-qoyan-jecel, sidaas darteed waxay u baahan tahay waraabin badan. Xilliga qoraxda, waxay u fiicantahay in biyaha lagu dhajiyo subaxda ama fiidkii, marka qorraxda qorraxdu aanay si kale u kululayn.
Inta lagu jiro muddada sanadka, balsamka ayaa la waraabiyaa laba ama saddex jeer toddobaadkii. Haddii dhirtu ay dareemayso la'aanta qoyaan, waxay bilaabataa inay hoos u dhigto caleenta oo si dhakhso ah u tagto. Waraabinta waxaa si tartiib tartiib ah loo yareynayaa habka jiilaalka.
Waa muhiim! Qoyaan xad dhaafka ah ayaa keenaya inay ka baxaan xididdada, taas oo ah sababta ay lagama maarmaan u tahay inay waraabiso geedka fiidkii oo leh daryeel weyn. Waa inaad si fiican ugu qoyso ciidda, laakiin ka ilaali biyaha joogtada ah ee dusha sare.
Haddii balsamku ku jiro qol qallalan, ka dibna kiiskan wuxuu u baahan yahay buufin marmar ah, kaas oo lagu talinayo subaxa.
Balsam Waller - warshad aad u kulul oo u baahan heerkul caadi ah. Habka heerkulka heerkulka ugu fiican waa isku xirka + 22 ... +24 digrii xagaaga.
Haddii hawadu kor u kacdo +24 digrii, markaa waa lagama maarmaan in la kordhiyo qoyaanka, ka dibna dhererka Waller ayaa si fiican u kori doona oo u barbardhigi doona. Si kastaba ha ahaatee, qoyaan badan iyo heerkulka hooseeya (ka hooseeya +18 digrii) waxay sababi karaan huruud ah caleemaha iyo leexashada nidaamka xididka.
Haddii heerkulka hawada ee inta lagu jiro maalintii ay ku kala duwan yihiin + 13 ... +15 ° S, oo hoos uga hooseeya +5 ° S habeenkii, ka dibna balsam walxaha uma dulqaadan doono xaaladahan iyo dhirta ayaa dhiman doonta. Qalabaynta dariiqa dheriga ayaa si xun u dulqaadan kara xitaa xaaladaha oo dhan. Waxaad ka bixi kartaa xaaladan adoo diyaarinaya gooynta horay, kaas oo loo isticmaali doono geedo guga. Geedaha sii kordhaya xilliga qaboobaha ee guriga waxay u baahan yihiin in ay joogteeyaan heerkulka heerkulka laga bilaabo +15 ilaa +24 degrees Celsius.
Wixii dhalid ah balsam waxaa loo isticmaali karaa labo siyaabood: gooyn ama abuur. Marka hore waxaa loo isticmaalaa badanaa badanaa, maadaama aysan u baahnayn dadaal badan, waana suurtogal in la diyaariyo gooynta xilliga qaboobaha. Habka labaad wuxuu ku badan yahay beerta.
Waxay kuu ogolaaneysaa inaad u koraan si sax ah geedo ama si toos ah goobta oo ay ku koraan mustaqbalka. Aan u fiirsanno faahfaahin dheeraad ah mid kasta oo ka mid ah hababka dhalmada.
Balsam koritaanka abuurka ah wuxuu yeelan karaa laba ujeedo muhiim ah. Marka hore waxay ku lug leedahay isticmaalka dhirta sida beerta ama daaqada. Beerashadani waxay ka kooban tahay si toos ah dhulka. Midda labaad waa isticmaalka niyadjabka sida geedo loogu talagalay diyaarinta ubax ama abuurista beerta dhagaxa. Halkan waxaan ku leenahay in dhirta ay sii wadi doonto in lagu bedelo. Xaaladdan oo kale, miraha waxaa lagu beeray weel caag ah oo la dabooli karo.
Waxaan ku talineynaa in aan akhrino sida loo si fiican u koro beerta iyo balsamyada qolka.
Haddii aad ku beerto dhirta weelka, ka dibna waxaad u baahan tahay inaad horay u diyaarsatid substrate taasoo noqon doonta mid furan oo nafaqo leh. Taangiga, halkaasoo lagu qorsheynayo in uu koro xasaasiyad, ku shub walxaha dhulka, si fiican isaga ku buufin biyo kulul kuna dar miro. Isla mar ahaantaana, waa in aan lagu daboolin dhulka, laakiin halkii yaree yaree.
Waa muhiim! Masaafada ugu wanaagsan ee soo noqnoqonaysa waa 3-4 cm. Haddii aan la sii wadin, markaas mustaqbalka waxay noqon doontaa mid aad u adag in la beero dhirta. Ka saarista noocan ah ee duurka ka yimid midba midka kale waxay u oggolaaneysaa inuu ku tallaalo isagoo aan waxyeelleynin xididada yar yar iyo kuwa jilicsan.
Video: beerashada balsam abuur
Weelka leh geedo waa la daboolay waxaana la dhigayaa meel diiran, oo si fiican u iftiimaya. Xaaladdan, heerkulka waa in lagu hayaa inta u dhaxaysa + 20 ... +25 digrii. Wakhti ahaan, daboolka weelka waa in la furaa oo laga tirtiraa kondensatada. Markaad ka saarto kondensate, waxaad xakameysaa heerkulka qoyaanka dushooda.
Laba todobaad ka dib ayaa caleemaha soo baxaya, ka dibna waxaa lagama maarmaan ah in lagu yareeyo heerkulka qolka ilaa + 15 ... + 18 digrii si aysan geedku u kala bixin.
Marka geedo koraan (geedo gaari 1 cm ee dhererka ama 3-4 caleemood ayaa marka hore muuqan doona), waxaa isla markiiba lagu beeray weelka ciidda ama dheriyada. Kobcinta balsam ka soo abuurka geedo isticmaalaya geedo, ka dib 8-10 usbuuc ka dib marka candhuufta, ubax ayaa la arki karaa.
Si aad u beerto Waller's balsam si toos ah dhulka u furan, heerkulku waa inuusan hoos u dhicin +13 digrii (habeenkii). Waxaa lagama maarmaan ah in la diyaariyo aag hore loo doortay (si fiican loo dabciyo ciidda), saliidda, kaas oo dabooli doona aagga, abuurista saamaynta aqalka dhirta lagu koriyo, iyo abuurka qudhooda.
Ka hor inta beero, ciidda si fiican u qoyaan iyo abuur ah lagu beeray. Waa in la xusuusnaado in masaafada u dhexaysa duurka waa in ay ahaataa 25 cm. Haddii la beeray marar badan, mustaqbalka waxaa lagama maarmaan u ah in la soo celiyo dhirta horey u koray.
Ka dib markii laga beerto, miraha waxaa lagu daboolay filim oo muddo gaaban, iyo ka dib markii biqilka, balsam ayaa si joogto ah u furay, kaas oo kuu ogolaanaya inaad si tartiib ah u dhirta dhirta dhalinyarada. Marka ubaxa loo isticmaalo jawiga, ma sii dabooli kartid. Mustaqbalka, haddii wakhti aysan soo ururin abuurka, ubaxku wuxuu ku dhufan doonaa is-goosashada.
Balsam faafin by gooyn waa habka ugu fudud iyo habka caadiga ah. Xilliga ugu wanaagsan ee gooynta goynta waxaa loo tixgeliyaa inay dhammaato bisha Agoosto. Waqtigaan, beerta beerta waxay jebiyaan gooynta apical, kuwaas oo lagu meeleeyay weel biyo nadiif ah.
Waa muhiim! Ka hor inta aan la gelin caleemaha biyaha, waxaa lagama maarmaan ah in laga saaro caleemaha hoose si aanay u bilaabin in qudhmi.
Qiyaastii usbuuc ka dib, gooyn ayaa awoodi doona inay ku farxaan muuqaalka dhalashada dhalinyarada. Ka dib markii biqilka, waxaa lagu beeray karaa weelal gooni ah. Xilliga jiilaalka, saboolka ayaa la koray sidii xayawaan caadi ah, iyo bilawga maalmood ee diirimaadka guga oo aan lahayn dhaxan habeen, waxaa lagu beeray dhul furan.
Video: jarida balsam Waller Faa'iidada habkan of beerashada waa biqilka degdeg ah ee gooyn, taas oo xitaa xilliga qaboobaha ay awoodaan inay ku farxaan inflorescences qurux badan oo dhalaalaya. Intaa waxaa dheer, oo leh habka guga, waxaad sidoo kale diyaarin kartaa guntooda cusub ee caleemaha yar yar.
Noocyada daryeelka, waxay ku xiran tahay meesha lagu hayo
Iyadoo ku xiran meesha uu balsam yahay (gudaha gudaha ama berrinka bannaan), muddada ubax iyo dhererku way kala duwan yihiin. Sidaas, xaaladaha gudaha, ubax koraan dheer (ilaa 60 cm) iyo Bloom dheer iyo ka sii badan.
Waxaan kugula talineynaa inaad akhrido sida aad u daryeeli laheyd Cusbada cusub ee Guinean ee guriga.
Goobta furan, halkaasoo geedka ay saameeyeen dhibcaha heerkulka, dabaysha iyo roobka, balsam ayaa koraa hooseeya (oo kaliya 30-40 cm). Impatiens, oo asal ahaan ku koray dhoobo, dambiile ama warshad, waxay u badan tahay inay ku noolaadaan xilliga qaboobaha.
Tan iyo markii aan lagu talin in beerista ubax ka soo duusho dhulka si furan jiilaal dheeraad ah, ka dibna haddii aad rabto in aad badbaadiso dhirta, waxay ka fiican tahay diyaarinta gooyn hore iyo iyaga ku beeran dheriga. Si kastaba ha ahaatee, waa lagama maarmaan in si joogto ah loola socdo qoyaanka iyo heerkulka. Haddii ay jirto hawo qalalan qolka, waxaa lagula talinayaa inaad ku buufiso dhirta si joogto ah, kaas oo gacan ka geysan doona ilaalinta qoyaanka.
Waa muhiim! Waa in la xusuustaa in inta lagu guda jiro xilliga jiilaalka, dadka saboolka ahi u baahan yihiin meel dhalaalaya, oo qabow iyo waraabin dhexdhexaad ah.
Balsam waxaa loo tixgeliyaa in uu yahay geed aan la qabin, si kastaba ha ahaatee, dhibaatooyinka qaarkood ayaa laga yaabaa inay ka soo baxaan geedi socodka beeraha. Badankood beeraleydu waxay ka cabanayaan in ceshaduhu ay bilaabayaan inay ciribtirmaan. Tan waxaa sababi kara laba sababood oo waaweyn.
Marka hore waa waraabinta xad dhaafka ah, iyo, natiijada, lafdhabarka nidaamka xididka. Haddii aad si joogto ah u buuxisid ubax, waxaa fiican inaad isticmaasho baqtiir leh muraayadaha biyaha lagu shubo. Xaaladdan oo kale, dhirta ayaa heleysa qiyaasta dareeraha uu u baahan yahay. Sabab kale waxay noqon kartaa isbeddel dhowaan la sameeyey. Dhibaatada dhibaatadani waa mid fudud - waa kaliya ee lagu celiyo ubaxa meeshiisii ​​hore. Haddii ceshaduhu ay bilaabaan inay huruud noqdaan ama caleemo dhacaan, markaa waa inaad u fiirsataa qoyaanka qolka, maaddaama tani ay tahay caddaalad cad oo ah hawo qallalan.
Xilliga dayrta ayaa laga yaabaa inay muujiyaan hawo qalalan ama ciid ah. Oo marka ay dhacdo marka inflorescence aan la aasaasay muddo dheer, waxaan ka hadli karaa xad-dhaaf ah nitrogen ama balsam sii kordhaya ee dheriga khaldan.
Haddii aad raacdo xeerarka aasaasiga ah ee ku saabsan daryeel la'aanta, waxay dhif tahay inuu jirrado.Si kastaba ha noqotee, haddii ay dhacdo dhibaato kasta oo dhirta, waa lagama maarmaan tahay in marka hore la eego xaaladaha ay balsamku ka kooban tahay.
Tani waxay gacan ka geysan doontaa in la ogaado sababaha ugu weyn ee cudurka, waxaa laga yaabaa inay ku jiraan maqaarka, ciribtirka caleemaha iyo ubaxa, iyo sidoo kale maqnaanshaha burooyinkeeda. Dhinaca muuqaalka muraayadaha madow ee caleemaha waxaa loola jeedaa in heerkulka hawadu hoos u dhacdo qulqul hoose oo khatar ah, ama warshadu waxay ka jirtaa bakteeriyada. Xaaladdan, waxa fiican in lagu daaweeyo habab gaar ah (tusaale ahaan, "Fundazol") ama leh antibiyootik fudud oo tetracycline ah 1 kiniin halkii 250 mg oo biyo ah. Laakiin ka soo cayayaanka, hudheelka, dabeecadda ma uusan ilaalin.
Ubaxa waxaa lagu doortaa caarada cad, aphid iyo caarada caarada. Dagaalka ka soo horjeeda cayayaanka ayaa kaa caawin kara daawooyinka gaarka ah (tusaale, "Neoron" ama "Aktely"), oo laga iibsan karo dukaanka ubaxa.
Haddii aad dareentid in caleemaha xumaantu ay noqdeen kuwo dhegdhexaad ah ama qaabdhismeed, ka dibna waxaa lagama maarmaan ah in si degdeg ah loo warshadeeyo warshadda laga bilaabo aphids. Si taas loo sameeyo, waxaad isticmaali kartaa xalka saabuunta. Si kastaba ha noqotee, haddii daaweyntu aysan ku caawinin, markaa waa inaad isticmaashaa daroogo wax ku ool ah ("Fitoverm", "Aktara", "Akarin" ama "Karate"). Waller's Balsam waa warshad qurux badan oo lagu kori karo guriga iyo berrinka bannaan. Isticmaalka ubaxkan naqshadda muuqaalka ah ayaa kuu ogolaanaya inaad qurxiso meel kasta, sidoo kale waa ku haboon tahay abuurista boodhka ubaxa ama walxaha kala duwan. Burooyinkeeda quruxda leh ee isku-dhafan oo aan caqli-gal ahayn waxay ka dhigaan geedo wanaagsan oo loogu talagalay beerta bannaanka.